सहज छैन शीर्ष नेतालाई, कस्तो छ प्रदेश ४ को अवस्था ? - Samudrapari.com
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बनिसकेका, पटकपटक प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका, बारम्बार मन्त्री भएका, युवा नेतादेखि डन को समेत पहिचान बनाएका उम्मेदवार प्रदेश न. ४ का जिल्लाम चुनावी मैदानमा छन् ।
उनै चर्चित उम्मेदवारका कारण यी जिल्लाको निर्वाचन परिणामप्रति धेरैको चासो छ । लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका हेभीवेट नेताको हारजितको आकलन अहिले धेरैतिर चलिरहेको छ ।
माओवादी छाडेर नयाँ शक्तिको संयोजन गरेका डा. बाबुराम भट्राई र अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका कारण गोरखा सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । दुवै नेता चर्चित भएका कारण उनीहरुमध्ये कसले जित्ने भन्ने अनुमान गर्न सहज छैन । त्यस्तै तनहुँ काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका कारण चर्चामा छ ।
पटकपटक प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बनिसकेका पौडेलका लागि पार्टीको आन्तरिक गुटबन्दीले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ । युवा नतो रवीन्द्र अधिकारीका कारण कास्कीले थोरै भए पनि चर्चा बटुलेको छ ।